Judo : Hiatrika ny fiadiana ny tompondaka maneran-tany, taranja judo, hotanterahina any Tokyo, ny 25 aogositra hatramin’ny 1 septambra ho avy izao, i Madagasikara. Manana solontena miisa enina mianadahy isika mandritra izany, efatra mirahalahy hahitana an’i Nazir Adbou (-60 kg), i Janeiro Chan Ling (-66 kg), i Marco Tolinantenaina (-66 kg) ary Ratsimiziva Fetra (-81 kg). Ho an’ny sokajy vehivavy kosa, i Tessia Tsiorinirina (-52 kg) sy i Nomenjanahary Damiella (- 63 kg) no hiaro ny voninahi-pirenana mandritra izany.
Ady totohondry – Afrika: Manomboka anio ny fifaninanana, ady totohondry, tanterahina any Maraoka. Tsy mbola mandray anjara raha tsy amin’ny alakamisy izao kosa ny Malagasy, misy roa lahy, eo amin’ny sokajy – 48 kg, ahitana an’i Nomenjanahary Heriniaina sy ny sokajy – 52 kg hahitana an’Andrianarivelo Marco Jérôme, nahazo ny medaly volamena, nandritra ny “Lalaon’ny Nosy farany teo. Tsy mitsahatra ny fanazarantena ho azy mirahalahy ireto nanomboka ny faran’ny herinandro teo.
« Combat libre »: Mitohy hatrany ny fizarana traikefa ataon-dRazafiarison Iony eto Madagasikara, vehivavy malagasy, mpiangaly taranja haiady kalaza any ivelany. Taorian’ny teto an-dRenivohitra ny voalohan’ny volana aogositra teo sy ny tany Toamasina, ny tapaky ny volana teo, efa any Fianarantsoa indray amin’izao Iony mampita fahalalana miaraka amin’ny fikambanana Andraranga. Ity fifampizarana ity izay haharitra hatramin’ny faran’ny volana aogositra izao, mialoha ny hiverenany any ivelany. Afa-po avokoa, hatreto, ireo mpikatroka nandray anjara, nahazo ny fampiofanana avy amin’Iony.